အရောင်းသမားတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက်(၅)ခု – Gentleman Magazine
အရောင်းပညာက အသုံးမ၀င်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါသလား ? နည်းပညာတွေက အစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် အရောင်းသမားတွေ မလိုတော့ဘူးလို့ ယူဆထားပါသလား ? သေချာတာတစ်ခုက ဒီလိုဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ နည်းပညာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ အဆင့်မြင့်လာပါစေ၊ ဘယ်လိုကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်းနဲ့ အခြားနည်းပညာသုံးပစ္စည်းတွေကမှ အရောင်းသမားတွေရဲ့နေရာကို အစားထိုးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အရောင်းသမားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးကြီးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အောင်မြင်တဲ့အရောင်းသမားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ၀င်ငွေအမြောက်အများရှာနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်တစားရှိတာကိုပဲ ရောင်းပါ။
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို သင်ကိုယ်တိုင်ကမှ မယုံကြည်ဘူး၊ အပြည့်အ၀နားမလည်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ရောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၂။ ရောင်းဖို့ထက် ကူညီပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ပါ။
စားသုံးသူတစ်ယောက်ကို သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ပြပြီး ဘယ်လိုအသုံးတည့်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြရုံပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီးလေးနက်တဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ လူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ သူတို့မိသားစုအကြောင်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့ဝါသနာတွေကို လေ့လာပြီး သူတို့ဘ၀မှာ ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေချော့မွေ့စေဖို့ ကူညီပေးကြည့်ပါ။
၃။ ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်လို အရောင်ပြောင်းတတ်ပါစေ။
၀ယ်လက်ကိုကြည့်ပြီး လိုအပ်သလို ပြုမူဆက်ဆံတတ်ဖို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်စာရေးတစ်ယောက်ကို ပြောဆိုဆက်ဆံသလို ကုမ္ပဏီ စီးအီးအိုတစ်ယောက်ကို သွားဆက်ဆံလို့ရမယ်လို့ ထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးကို သာတူညီမျှလေးစားသမှုရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေကို မတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲဆက်ဆံနိုင်စွမ်းရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းချပါ။
အရောင်းသမားတွေရဲ့ (၄၉)ရာခိုင်နှုန်းက ၀ယ်လက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသူနဲ့ တစ်ခါတွေ့ပြီးရင် နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပြီး ရောင်းချဖို့ မကြိုးစားတတ်ကြပါဘူး။ ဒါက လုံးဝမှားယွင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း Follow up လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၀ယ်လက်ကောင်းတွေကလည်း ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းချတာမျိုးကို လေးစားသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။
၅။ ပါးနပ်စွာရောင်းချမှုကို ကျွမ်းကျင်ပါစေ။
၀ယ်ချင်ဝယ်၊ မ၀ယ်ချင်နေဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးနဲ့ Hard sell ရောင်းချမှုပုံစံမျိုးက အခုခေတ်မှာ အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ၀ယ်လက်ဖြစ်နိုင်သူက ငြင်းဆန်နေရင်တောင်မှ အဆက်အသွယ်ကို ထိန်းထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကို လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပြောပြပါ၊ မွေးနေ့ကဒ်နဲ့ လက်ဆောင်ပေးတာတွေ လုပ်ဆောင်ပါ။ အခြားဖောက်သည်တွေနဲ့ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ပြသပါ။ သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ကို ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်လိုက်ပါနဲ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သင့်ကို သူတို့လိုအပ်တယ်လို့ ခံစားရလာပါလိမ့်မယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေက အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခြေခံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့ ပေးဆပ်မှုတွေ အများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်။ အရောင်းပညာဟာ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘဲ ဇွဲအပြည့်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်လာမှာ သေချာပါတယ်။
အရောငျးပညာက အသုံးမဝငျတော့ဘူးလို့ ထငျပါသလား ? နညျးပညာတှကေ အစားထိုးဝငျရောကျလာတဲ့အတှကျ အရောငျးသမားတှေ မလိုတော့ဘူးလို့ ယူဆထားပါသလား ? သခြောတာတဈခုက ဒီလိုဘယျတော့မှ ဖွဈလာမှာမဟုတျဘူး ဆိုတာပါပဲ။ နညျးပညာတှေ ဘယျလောကျပဲ အဆငျ့မွငျ့လာပါစေ၊ ဘယျလိုကှနျပြူတာ၊ စမတျဖုနျးနဲ့ အခွားနညျးပညာသုံးပစ်စညျးတှကေမှ အရောငျးသမားတှရေဲ့နရောကို အစားထိုးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အရောငျးသမားတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍက အရေးကွီးနဆေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ အောငျမွငျတဲ့အရောငျးသမားတဈယောကျအဖွဈနဲ့ ဝငျငှအေမွောကျအမြားရှာနိုငျဖို့အတှကျ နညျးလမျးကောငျးတဈခြို့ကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ အမှနျတကယျစိတျဝငျတစားရှိတာကိုပဲ ရောငျးပါ။
ထုတျကုနျပစ်စညျးတဈခုခုကို သငျကိုယျတိုငျကမှ မယုံကွညျဘူး၊ အပွညျ့အဝနားမလညျဘူးဆိုရငျ ဘယျလိုမှ ရောငျးနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
၂။ ရောငျးဖို့ထကျ ကူညီပေးနိုငျဖို့ လုပျပါ။
စားသုံးသူတဈယောကျကို သငျ့ရဲ့ကုနျပစ်စညျးထုတျပွပွီး ဘယျလိုအသုံးတညျ့နိုငျကွောငျး ရှငျးပွရုံပဲ မဟုတျပါဘူး။ ဒီထကျပိုပွီးလေးနကျတဲ့အဓိပ်ပါယျတှေ ရှိနပေါသေးတယျ။ လူတှရေငျဆိုငျနရေတဲ့ စိနျချေါမှုတှေ၊ သူတို့မိသားစုအကွောငျးတှေ၊ သူတို့ရဲ့ဝါသနာတှကေို လလေ့ာပွီး သူတို့ဘဝမှာ ပိုမိုလှယျကူအဆငျပွခြေော့မှစေ့ဖေို့ ကူညီပေးကွညျ့ပါ။
၃။ ပုတျသငျညိုတဈကောငျလို အရောငျပွောငျးတတျပါစေ။
ဝယျလကျကိုကွညျ့ပွီး လိုအပျသလို ပွုမူဆကျဆံတတျဖို့ ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ သာမနျစာရေးတဈယောကျကို ပွောဆိုဆကျဆံသလို ကုမ်ပဏီ စီးအီးအိုတဈယောကျကို သှားဆကျဆံလို့ရမယျလို့ ထငျရငျမှားသှားပါလိမျ့မယျ။ နှဈယောကျစလုံးကို သာတူညီမြှလေးစားသမှုရှိသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့တှကေို မတူညီတဲ့နညျးလမျးတှနေဲ့ ဆကျသှယျပွောဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။ မတူညီတဲ့အခွအေနအေမြိုးမြိုးမှာ အလိုကျသငျ့ပွောငျးလဲဆကျဆံနိုငျစှမျးရှိရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၄။ ဇှဲကောငျးကောငျးနဲ့ ရောငျးခပြါ။
အရောငျးသမားတှရေဲ့ (၄၉)ရာခိုငျနှုနျးက ဝယျလကျဖွဈနိုငျခရြှေိသူနဲ့ တဈခါတှပွေီ့းရငျ နောကျထပျဆကျသှယျပွီး ရောငျးခဖြို့ မကွိုးစားတတျကွပါဘူး။ ဒါက လုံးဝမှားယှငျးတဲ့ အလအေ့ကငျြ့တဈခုဖွဈပါတယျ။ အမွဲတမျး Follow up လုပျနရေမှာဖွဈပါတယျ။ ဝယျလကျကောငျးတှကေလညျး ဇှဲကောငျးကောငျးနဲ့ ရောငျးခတြာမြိုးကို လေးစားသဘောကတြတျကွပါတယျ။
၅။ ပါးနပျစှာရောငျးခမြှုကို ကြှမျးကငျြပါစေ။
ဝယျခငျြဝယျ၊ မဝယျခငျြနဆေိုတဲ့ အခြိုးမြိုးနဲ့ Hard sell ရောငျးခမြှုပုံစံမြိုးက အခုခတျေမှာ အသုံးမဝငျတော့ပါဘူး။ သငျ့အနနေဲ့ အရောငျးသမားကောငျးတဈယောကျဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ ဝယျလကျဖွဈနိုငျသူက ငွငျးဆနျနရေငျတောငျမှ အဆကျအသှယျကို ထိနျးထားသငျ့ပါတယျ။ သူတို့ကို လုပျငနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ ပွောပွပါ၊ မှေးနကေ့ဒျနဲ့ လကျဆောငျပေးတာတှေ လုပျဆောငျပါ။ အခွားဖောကျသညျတှနေဲ့ သငျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုကို ပွသပါ။ သူတို့နဲ့ပတျသကျပွီး မြှျောလငျ့ခကျြကို ဘယျတော့မှမစှနျ့လှတျလိုကျပါနဲ့။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သငျ့ကို သူတို့လိုအပျတယျလို့ ခံစားရလာပါလိမျ့မယျ။
အခုဖျောပွခဲ့တဲ့အခကျြတှကေ အရောငျးသမားကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့ အခွခေံတှပေဲဖွဈပါတယျ။ တကယျအောငျမွငျဖို့အတှကျကတော့ ပေးဆပျမှုတှေ အမြားကွီးလိုအပျပါသေးတယျ။ အရောငျးပညာဟာ တဈဖကျကမျးခတျကြှမျးကငျြဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျတော့မှအရှုံးမပေးဘဲ ဇှဲအပွညျ့နဲ့ကွိုးစားမယျဆိုရငျတော့ သငျ့လုပျငနျးအောငျမွငျတိုးတကျလာမှာ သခြောပါတယျ။
Previous: အောင်မြင်မှုနဲ့ လမ်းလွဲစေမည့် ဆုံးဖြတ်ပုံအလွဲများ
Next: အိမ်ထောင်ဖက်ကို စိတ်ပိုကြွလာအောင်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ